October 2017 - Khit Minnyo
Python-for-Hackers October 31, 2017
Python2 Lesson 8
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တော့ ပိုပိုပြီးရောလာပြီနော်။ ဒါကြောင့် တစ်ခုစီ ပိုင်ရုံလိုက်လုပ်တာထက် ပြီးခဲ့တာတွေကို တစ်ခုစီ တစ်ကြိမ်လောက် ပြန်လုပ်ကြည့်ဖို့
အဲလိုပြန်လုပ်တဲ့အခါ သင်ခန်းစာကို ပြန်ကြည့်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အလွတ် လုပ်ဆောင်ဖို့ မှာထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့အတွက် Clipping and Editing အပိုင်းလေးကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
Sequence Lists တွေကို ဖြတ်ထုတ်တာနဲ့ လိုအပ်သလို တည်းဖြတ်တာကို Clipping and Editing လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Sequence lists လေးတွေ တည်ဆောက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် python ကို ခေါ်လိုက်ပါ။
>>> aaa = [ 'car' , 'war' , 'cow' , 'dog' , 'cat' , 'pig' ]
>>> bbb = [ 'book' , 'beer' , 'brick' , 'boat' , 'ball' , 'bow' ]
အထက်ပါအတိုင်းပဲ sequence lists ၂ခု တည်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။
>>> aaa += bbb လို့ ထားလိုက်ပြီး
>>> aaa ကို enter ခေါက်ကြည့်တဲ့အခါ
['car', 'war', 'cow', 'dog', 'cat', 'pig', 'book', 'beer', 'brick', 'boat', 'ball', 'bow']
ဆိုပြီး ထွက်လာပြီပြီ။ += နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှေ့ပိုင်း သင်ခန်းစာတွေမှာ ပါခဲ့ပြီမို့ ထပ်မပြောတော့ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာက aaa ဟာ ခုဆိုရင် တန်ဖိုး 12 ခု ဖြစ်သွားပါပြီ။ သုညကနေ ၁၁ ထိပေါ့။
>>> aaa [6:9]
['book', 'beer', 'brick']
အမှတ်စဉ် ၆ ကနေ ၉ အထိ လေးခု ထုတ်ပေးရမှာ ခုတော့ အမှတ်စဉ် ၉ ဖြစ်တဲ့ boat ပါမလာဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။
အမှတ်စဉ် ရေတွက်တဲ့အခါ စမှတ် သုည ကနေ စတယ်ဆိုတာတော့ သိပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ အမှတ်စဉ် သုညကနေ ရေတွက်ရင်
book ဆိုတာ အမှတ်စဉ် ၆ပါ။ မှန်နေတာပေမယ့် အမှတ်စဉ် ၉ ကို ဖော်ပြမထားတာကတော့ Clipping ဆိုတဲ့ ဖြတ်တောက်ခြင်း သဘောတရားကိုပဲ ပြန်ပြီး ပြောပြရပါမယ်။
၆ ကနေ စပြီး ၉ အထိ ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ် ဆိုရာမှာ
6<= x <9 p="">အဆုံးမှတ်ကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဖြတ်ထုတ်လိုက်မှတော့ ဘယ်ပါပါတော့မလဲ။ ဒါကြောင့် အဆုံးမှတ်9ထိ လိုချင်ရင် တစ်ခုပိုပြီး 10 ကို ဖြတ်ထုတ်ခိုင်းရပါမယ်။
>>> aaa [6:10]
['book', 'beer', 'brick', 'boat']
ဒါဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ လိုချင်တဲ့အတိုင်း အမှတ်စဉ် ၆ မှ ၉ အထိ ရပါပြီ။
ဒီလောက်ဆိုရင် ဒီအပိုင်းကို နားလည်ပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
ခုန ထုတ်လိုက်တဲ့ အဖြေက အစဉ်လိုက်အဖြေကြီးဖြစ်နေတယ်။ အစဆုံး သုညမှတ်ကနေ ၂ခုကျော်စီ ထုတ်သွားချင်တယ်ဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်တို့ ဘာသုံးကြမလဲ။
ဒီနေရာမှာ ရှေ့ သင်ခန်းစာတွေကို ကြေခဲ့သူတွေက တွေးမိလိမ့်မယ်ဗျ။ Auto increase ကိုလေ။ ကိုယ်တိုးသွားချင်တဲ့ကိန်းကို နောက်ဆုံးမှာ ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တာမို့လား။
အဲဒါ ရ မရ စမ်းကြည့်လိုက်ရင် အဖြေထွက်ပြီပေါ့နော
>>> aaa [0:10:2]
['car', 'cow', 'cat', 'book', 'brick']
ဟော လိုချင်တဲ့အတိုင်း အစကနေ တစ်ခုကျော်စီ သွားတယ်။ ၁၀ အောက်ဆိုတော့ သုညကနေစ ကိုးအထိ တစ်ခုကျော်မို့ ၅ခု အဖြေရတယ်။
တစ်ခုကျော်စီဟုတ်မဟုတ် ပြန်တိုက်စစ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ခုလောက်ဆို ၂ခုကျော်လိုချင်ရင် နောက်မှာ ၃ ထည့်ရုံပဲဆိုတာ သိသွားပါပြီ။ ရှေ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ အလျဉ်းသင့်သလို ပေါင်းပေးနေတယ်နော်။ စာ ကျေ မကျေ စစ်ဆေးနေတာ :)
ကဲ ဒီခါ အဲသည်အမှတ်စဉ်တွေကို နောက်ကနေ ပြန်ရေရအောင်ဗျာ။ ဒါက နမူနာပြထားတာမို့သာ။ တကယ်တမ်း list မှာ အရမ်းများနေရင် နောက်ကနေ ပြန်ရေမှ အဆင်ပြေတာတွေလည်း ရှိတယ်ဗျ။
ဥပမာပေးရရင် list 100 လောက် ရှိတယ်ဆိုကြစို့။ list 100 လောက် ထဲကမှ နောက်ဆုံးက ၇ လုံးလောက်ကို လိုချင်တဲ့အခါ 100 လောက်ဆိုတာလည်း ခန့်မှန်းခြေပဲ တစ်ကယ်က ဘယ်လောက်မှန်း အတိအကျမသိဘူးဆိုပါစို့။ ရှေ့ကနေ90 ကျော်ထိ မျက်စိရှုပ်ခံပြီး ရေတွက်နေမလား။
ဘယ်တွက်ပါ့မတုန်း နောက်ကပဲ ပြန်ရေရင် ပိုမြန်တာပေါ့ နော။
ကဲ ခုလည်း နောက်ဆုံးကနေ ပြန်လည်ရေတွက်ရအောင်ပါ။ နောက်ဆုံးလုံးကနေ ရှေ့ ဆယ်လုံးထိ ပြန်ယူမယ် ဆိုပါစို့။
>>> aaa [-1:10]
>>> aaa [-1:-10]
>>> aaa [-1 : -10]
ထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ အဖြေတွေလည်း တစ်ခုမှ မထွက်ပါလား။ ဘာမှားနေလို့ပါလိမ့်။
အောက်က ပြောပြတာကို ဆက်မကြည့်ဘဲ အဖြေကို ရှာနိုင်ရင်တော့ အတော့်ကို တော်သွားပြီလို့ ပြောလို့ရပါပြီ။
ကိန်းတွေကို နောက်ပြန်ပြန်ရေတဲ့အခါ ရှိသလောက် ထုတ်စေချင်လို့ ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဆုံးမှတ် ကိုပဲ ရေးရတာ သတိပြုရမယ်။
>>> aaa [-1: ]
>>> aaa [-10: ]
['cow', 'dog', 'cat', 'pig', 'book', 'beer', 'brick', 'boat', 'ball', 'bow']
နောက်ကနေ ပြန်ရေရင် ဆယ်ခု ယူထားတာဖြစ်တယ်။
အဲသည်မှာပဲ ခုနလို auto increase သုံးကြည့်ရအောင်။
>>> aaa [-10: :2]
['cow', 'cat', 'book', 'brick', 'ball']
ဆယ်ခုအထိပဲ နောက်ဆုံးကနေ တစ်ခုကျော် ပြန်ထည့်ပြထားတာပါ။ အလယ်ခေါင် နေရာမှာ space ခြားရုံလေးပဲ ခြားခဲ့ရင် ရပါပြီ၊
နောက်ဆုံးကနေ တစ်ခုကျော်စီ အားလုံးလိုချင်ရင်တော့ ဒီလိုလေး ရေးလို့ရပါတယ်ဗျ
>>> aaa [ : :2]
['car', 'cow', 'cat', 'book', 'brick', 'ball']
နောက်ဆုံးကနေ တစ်ခုကျော်စီ အကုန်ယူခိုင်းလိုက်တာပါ။
အသစ်မစခင် Sequence Lists and Tuple ကို ယှဉ်တွဲပြီး ပြန်နွှေးရအောင်ပါ။
အဲသည်၂ခုက အမှတ်တမဲ့ဆို တူသယောင် ထင်ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Sequence Lists ကို ရေးတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ သုံးတာက [ထောင့်ကွင်း] နော်။
Tuple ကိုရေးတဲ့အခါမှာ သုံးရတာက (လက်သည်းကွင်း) နော်။
မတူတာကို ပြောပြတာပါ။ ပြန်မှတ်မိအောင်ပေါ့။
Adding and Slicing ကို ဆက်သင်မှာမို့ Sequence Lists and Tuple ကို ပြန်ဖော်ရုံလေးပဲ သတိရအောင်ပြောပေးတာပါ။
Adding and Slicing ကို ဆက်လက် လေ့လာကြပါစို့။
ခုနလိုပဲမို့ အလွယ်ပဲ ပြန်တည်ဆောက်လိုက်ရအောင်။
>>>a= [ 'aa' , 'bb' , 'cc' , 'dd' , 'ee' , 'ff' ]
>>>b= [ '11' , '22' , '33' , '44' , '55']
>>> c = [ 'a1' , 'a2' , 'a3' , 'a4' , 'a5' , 'a6' ]
ကဲ တည်လိုက်ပြီနော်။ အလွယ်ပဲ :)
['aa', 'bb', 'cc', 'dd', 'ee', 'ff', '11', '22', '33', '44', '55']
ပေါင်းထည့်ပြီးaကို ပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်တော့ အများကြီးပဲ တွေ့ရပါပြီ။
['aa', 'bb', 'cc', 'dd', 'ee', 'ff', '11', '22', '33', '44', '55', 'a1', 'a2', 'a3', 'a4', 'a5', 'a6']
c ပါ ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အတွက်aမှာ အများကြီး ဖြစ်သွားပြီနော်။
sequence တွေ ခေါ်သုံးကြည့်လိုက်ရအောင်
>>>a[-2]
>>>a[0:6]
['aa', 'bb', 'cc', 'dd', 'ee', 'ff']
>>>a[-5: ]
['a2', 'a3', 'a4', 'a5', 'a6']
နောက် ၅လုံး ဖော်လို့ရနေပြီ။ ခုန command တွေကိုချည်းပြန်ပြောနေတာနော်။
>>>a[0: :3]
['aa', 'dd', '11', '44', 'a2', 'a5']
အစ အဆုံး ၂လုံးကျော်စီ ယူလိုက်တာ။
ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေပြီထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု ဆက်ရအောင်ပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်သွားအောင် သင်ခန်းစာ ခေါင်းစဉ် မပြောသေးဘူးဗျာ
ပရိုဂရမ်လေးတစ်ခုကို အောက်ပါအတိုင်း တည်ဆောက်ကြည့်ရအောင်
lesson 1 က နမူနာကိုပဲ ယူသုံးရအောင်
a တန်ဖိုးက အားလုံးပေါင်းပြီးသွားပြီနော်။ ဒါဆိုasequence0က ဘာဖြစ်မလဲ။
ရှင်းပါတယ်။ aa က seq0ပေါ့။ ဟုတ်မဟုတ်ကို terminal မှာကြည့်ဦးမလား။
မှားစရာမရှိဘူး သူက ရှေ့ဆုံးပဲလေ။ သိပြီးသားတွေ။ ခုပြန်ပြောပြရတာက အဲသည်0တန်ဖိုးကို aa မဟုတ်ဘဲ အခြားတစ်ခုကို ပေးလိုက်ချင်တာ။ အဲမှာ စပြီ။
>>>a = "11"
['11', 'bb', 'cc', 'dd', 'ee', 'ff', '11', '22', '33', '44', '55', 'a1', 'a2', 'a3', 'a4', 'a5', 'a6']
>>> ကဲ တွေ့ပြီ။ သုညတန်ဖိုးကို 11 လို့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက် 11 ကို သုညတန်ဖိုးထားပြီး ဖော်ပြသွားတယ်။
>>>a[-2] = "ff"
['11', 'bb', 'cc', 'dd', 'ee', 'ff', '11', '22', '33', '44', '55', 'a1', 'a2', 'a3', 'a4', 'ff', 'a6']
>>> သတိထားကြည့်ကြည့်ပါ။နောက်ဆုံးက ရေရင် ဒုတိယနေရာမှာ ff ရောက်သွားပါပြီ။ အစားဝင်ယူသွားတာဖြစ်ပြီး ဝင်ခံရတဲ့နေရာက ကိန်းတော့ ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပေမယ့် အစားဝင်လာတဲ့ကိန်းတွေကတော့ မပျောက်ဘဲ ဆက်ရှိနေတာပါ တစ်ဆက်တည်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမျိုးအချက်လေးတွေပါ သတိထား မှတ်ထားပေါ့။
အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်သွားအောင် နောက်ထပ် နမူနာ သေးသေးတစ်ခု အသစ်လုပ်ပြပါ့မယ်။
>>> kmn = [ "a" , "b" , "c" , "d" , "e" , "f" ]
>>> kmn [0:5]
>>> ဒီအထိတော့ သိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ 0:5 ဆိုတာ သုညကနေ အမှတ်စဉ် လေးအထိ ကိန်းငါးလုံး ထုတ်ပြခိုင်းတာပါ။ သိပြီးသားကို ထပ်ပြောရခြင်းက ၆လုံးရှိတဲ့အနက် အဲသည် ၅လုံးကို အစားထိုးမှာမို့ပါပဲ။
>>> kmn [0:5] = "g" , "h" , "i" , "j" , "k"
['g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'f']
အောက်ဆုံးအကြောင်းက kmn ကို ပြန်ဖော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ခုန အစားသွင်းလိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ အသီးသီး နေရာဝင်ယူသွားကြတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတော့ မူလ ရှိပြီးသားနေရာမှာ အစားထိုးတာ ဖြစ်လို့ သူ့ကို replace function လို့ မှတ်ထားရအောင်။
အဲမှာပဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်ဗျ။ လိုအပ်တုန်းက ထည့်သုံးခဲ့ပြီး မလိုအပ်တော့တဲ့အချိန်မှာ ပြန်ဖြုတ်ချင်ရင် del လေးကို သုံးတယ်ဗျ
ဖော်ကြည့်လိုက်ရင် ခုတန်ဖိုးရှိနေတယ်နော်။ kmn  က ဘာဖြစ်မလဲ။
ပထမဆုံး g ပေါ့။ အဲသည် g ကို ဖျက်မယ်ဆိုပါစို့။
>>> del kmn 
['h', 'i', 'j', 'k', 'f']
ပထမဆုံး g မရှိတော့ဘူးဗျ။ ခုတိုင်းဆို h က kmn ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ :)
ကဲ နောက်ဘက်ကနေ နမူနာ ဖျက်ကြည့်ရအောင်။ kmn [-2] က ဘာလဲ။
နောက်က ပြန်ရေရင် k ပေါ့။ သူ့ကို ဖျက်ကြည့်။
>>> del kmn [-2]
['h', 'i', 'j', 'f']
ကျွန်တော်တို့ ဖျက်လိုက်တာတွေ မရှိတော့ဘူးနော်။
ဒီအပိုင်းထိ လုပ်ခဲ့ပြီးတာလေးတွေ ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျ။
ဒီအထိ အဆင်ပြေလာပြီဆိုတော့ Slicing Code လေး နည်းနည်း စမ်းမယ်ဗျာ။
In : kmn = ()
In : if not kmn:
...: print "\_n Hello! Mr, you are wrong!"
...: print "\_n So you must choose the followings....."
In : kmn = [ "0)book", "1)Laptop", "2)Shirt", "3)Phone" ]
In : for item in kmn:
...: print "\_n The item you choose is :" + item
...: raw_input("\_n Press Enter to exit....")
အထက်ပါ ပုံစံကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ipython မှာ စမ်းပြထားတာကို သိမှာပါ။ ဒီခါတော့ leafpad မှာ အဲဒါတွေကို ရိုက်ပြီး desktop ပော်မှာ lesson9.py လို့ save လိုက်ပါ။
kmn = ()
if not kmn:
print "\_n Hello! Mr, you are wrong!"
print "\_n So you must choose the followings....."
kmn = [ "0)book", "1)Laptop", "2)Shirt", "3)Phone", "4)Wifi" , "5)knife" ]
for item in kmn:
print "\_n This item is : " + item
raw_input("\_n Press Enter to exit....")
ဆိုပြီး RUN ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုန အဖြေတွေကို တစုတစည်းတွေ့ရမှာပါ။
နည်းနည်းထပ်ဖြည့် ဆက်ရေးပြီး ပြန် RUN ကြည့်ရအောင်။ ခုန lesson9.py ကိုပဲ R-click ပြီး Text Editor နဲ့ ဖွင့်မယ်နော်။
print "\_n This item is :" + item
index = int(raw_input("\_n Choose any item you want,0to 5, ..."))
print "\_n The item you choose is : " + kmn [index]
ပြင်ရေးပြီးသားဖိုင်ကို ပြန်ပြီး RUN ကြည့်ပါဦး။
ီအဆင်ပြေရဲ့လား။ ပြေတယ်ဆို နောက်ထပ် နည်းနည်းလောက် ထပ်ဖြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
Slicing Coding လေးတွေ ထပ်ဖြည့်ပါမယ်။
raw_input("\_n Press Enter to continue....")
print "\_n Hi, Mr., You can choose group of items (to5items)!"
begin = int(raw_input("\_n Choose started number of the item you want......"))
end = int(raw_input("\_n Choose last number of the item you want......."))
print "\_n Your choosing items are : ", kmn [begin: end]
print "\_n Your choice is best. Good idea ! "
ခုတော့ ဒီလိုလေး ဖြစ်သွားပါပြီ။
Lesson9ကြည့်ရန် Click Here
By KhitMinnyo on October 31, 2017 No comments:
Python-for-Hackers October 30, 2017
By KhitMinnyo on October 30, 2017 No comments:
Kali October 28, 2017
Installing Chrome Browser on Kali Linux & open it with root account
ဒီနေ့တော့ Kali Linux မှာ Chrome Browser တင်ချင်တဲ့သူတွေရော root account ကနေ ဖွင့်လို့ မရတဲ့ သူတွေရောအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ပြုလုပ်ထားတာ ကြာခဲ့ပြီဆိုပေမယ့် လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းက အတူတူပဲမို့လို့ ဒီတိုင်းလေးပဲ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမို့ လိုက်လုပ်ကြည့်ရ အဆင်ပြေမှာပါ
ဒီ website ကလေးကနေ တင်ထားပေးတဲ့ article များကို သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ကြည့်ရှုလိုပါက ဒီစာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပြီးလည်း ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
By KhitMinnyo on October 28, 2017 No comments:
Hacking လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် Word Lists တစ်ခုစီကို Kali Linux မှာ တည်ဆောက်ခြင်း
Kali Linux မှာ Word Lists တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခြင်း
Hacking trick တွေ လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာတော့ word list တွေကို အသုံးပြုရမယ့် သင်ခန်းစာတွေ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ word list တစ်ခုကို တည်ဆောက်အသုံးပြုဖို့ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ စဉ်းစားတည်ဆောက်နေရင် နှစ်တွေနဲ့ချီ ကြာသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် word list တည်ဆောက်ရာမှာ ကောင်းမွန်လှတဲ့ tool ကလေးတစ်ခုကို install လုပ်ထားပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ ခုလိုအခက်အခဲတွေ ကင်းဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
word list တစ်ခု တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အဓိက လိုအပ်တဲ့ application ကို ထည့်သွင်းကြရအောင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ kali မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Sources list ဖိုင်ကို ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။
Terminal Command = leafpad /etc/apt/sources.list
ပွင့်လာတဲ့ဖိုင်ထဲမှာ Source တွေကို ပြန်ကြည့်ပါ။
Kali Linux 2016 ဆို
Kali Linux 2017 ကို သုံးတာ ဆိုရင်တော့
deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-gree contrib
အဲဒီတစ်ကြောင်းကိုသာ # မခံဘဲ ရေးထားရမှာဖြစ်ပြီး ကျန်စာကြောင်းတွေပါ ပါဝင်နေပါက ကျန်စာကြောင်းများ အားလုံးရှေ့မှာ # ကို ထည့်ပြီး ပိတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ source တွေ ရောကုန်မှာစိုးလို့ပါ။
ပြီးရင်တော့ ရှေ့သင်ခန်းစာပါ command တွေထဲကမှ ပထမဆုံးအနေနဲ့
root@kali:~# mkdir CUPP
ဆိုပြီး mkdir command ကို သုံးလို့ CUPP ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။ ရိုက်ရမယ့်စာက mkdir CUPP နော်။ ရှေ့စာတွေက နမူနာထည့်ထားတာ။
root@kali:~# cd CUPP
ဆိုပြီး cd ကို အသုံးပြုလို့ ခုန ဖန်တီးထားတဲ့ထဲကို ဝင်ရောက်လိုက်ပါတယ်။
root@kali:~/CUPP# git clone https://github.com/Mebus/cupp.git
ဒီအဆင့်ကတော့ လိုအပ်တဲ့ git ကို စက်မှာ clone command ကို အသုံးပြု ရယူလိုက်ခြင်းပါ။
Cloning into 'cupp'...
ဒီနေရာမှာ ls နဲ့ ဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါ အောက်ပါအတိုင်း cupp folder တစ်ခုကို ထပ်မံ တွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်
root@kali:~/CUPP# cd cupp
cd command ကို အသုံးပြုပြီး cupp ထဲကို ထပ်မံ ဝင်ရောက်လိုက်ပါ။
နဲ့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖိုင်တွေကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
CHANGELOG.md cupp3.py cupp.cfg cupp.py LICENSE README.md test_cupp.py
ဒီအထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကို ပြန်ကြည့်ရင် အောက်ပါအတိုင်း မြင်ရပါမယ်
root@kali:~/CUPP/cupp# leafpad cupp.cfg
cfg ဆိုတဲ့ configure ဖိုင်ကို leafpad နဲ့ ဖွင့်လိုက်တာပါ။ leafpad နေရာမှာ gedit လို့ ရိုက်လည်း ရပါတယ်။ အဲမှာ ပြင်ဆင်စရာအချက်တစ်ခု ရှိနေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ပွင့်လာတဲ့ leafpad ဖိုင်ထဲမှာ [leet] ဆိုတာကို တတိယပိုဒ်မှာ တွေ့ရပါမယ်။ အဲသည်နောက်ကနေ enter ဆင်းလိုက်ပါ။ [leet] နဲ့ a=4 ဆိုတဲ့ စာကြောင်း ၂ကြောင်းကြားမှာ ကာဆာလေး ရောက်ပြီဆိုရင်တော့
a=@ ဆိုတာလေးကို ရိုက်ထည့်ပြီး save လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(File>>> Save or Ctrl + s) Save ပြီးရင်တော့ အဲသည် leafpad ကို ပိတ်လိုက်လို့ ရပါပြီ။ ပြီးရင် terminal မှာ အောက်ပါအတိုင်း ထပ်ရိုက်ပါ။
root@kali:~/CUPP/cupp# python cupp.py -i
ကျွန်တော်တို့ ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ python နဲ့ ရေးထားတဲ့ program ကို run လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမို့ ဒီနေရာကို သေချာ အောင် အောက်မှာ ထပ်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
> First Name: သင့် viactim ရဲ့ နာမည်ကို Eng လို ရေးပါ။ ဥပမာ - Khit (ဥပမာ ရေးပြတာနော်။ တကယ်လာမလုပ်ကြနဲ့ဦး ) အောက်မှာ ပြန်ပြထားတယ်
ကိုယ့် victim ရဲ့ အခြေခံ အချက်အလက်တွေကိုတော့ သိထားဖို့ လိုတယ်နော်။ အင်ဖို စုတယ်ဆိုတာ အဲနေရာမှာ အသုံးဝင်ဖို့ပဲ။
တစ်ဆင့်စီပုံမပြတော့ဘူးနော်။ ကျွန်တော်က အောက်ပါအတိုင်းပဲ စီရေးပြပါတော့မယ်
> First Name: Khit
> Surname: Minnyo
> Nickname: kmn
ဒါတွေက ကျွန်တော် နမူနာ စမ်းပြထားတာနော်။ ကျွန်တော့် password ပါသွားမယ်။ မစမ်းကြနဲ့ 😜😜😜😜
> Birthdate (DDMMYYYY): 1/2/1985
ဒါက တမင် ဖြည့်ပြတာပါ။ ဒီအတိုင်းဆို အောက်ပါအတိုင်း error ပေါ်ပါမယ်။
[-] You must enter 8 digits for birthday!
> Birthdate (DDMMYYYY): 01/02/1985 ဒီလိုဖြည့်လို့လည်း မရသေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် 8 digits ပဲ ထည့်ဖို့ ပေးထားပြီးသားမို့ပါ။ ဒါဆို ဘယ်လိုဖြည့်မလဲ။ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြည့်ရပါမယ်။
> Birthdate (DDMMYYYY): 01021985
01 02 1985 ပေါ့။ တစ်ရက် ၂လ ၈၅ ကို အဲလို ဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ တစ်ဆယ်မပြည့်ရင် ရှေ့မှာ သုည ထည့်ထားရမယ်။
> Partners) name: Phway Phway (ကိုယ့် သားကောင်နဲ့ သက်ဆိုင်သူ ရင်းနှီးဆုံးသူတွေရဲ့ နာမည်တွေ သုံးသင့်တယ်) 😂😂😂😂
> Partners) nickname: phwaylay
> Partners) birthdate (DDMMYYYY): 12101989
12 ရက် 10 လ 1989
နမူနာ ပြတာပါ။ 😳😳😳😳😳
> Child's name: Nay Toe
> Child's nickname: konaykotoe
> Child's birthdate (DDMMYYYY): 28012016
သူ့မှာ သားသမီးမရှိလည်း အခြား တစ်ယောက်ယောက်ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်
> Pet's name: Pussy
> Company name: Free
ဒါကတော့ အခြေခံ အချက်အလက်ပါ။
> Do you want to add some key words about the victim? Y/[N]: y ထပ်ဖြည့်ဦးမလား မေးတာပါ။ y နဲ့ ကိုယ်ဖြည့်ချင်ရာတွေ ဖြည့်ဖို့ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
> Please enter the words, separated by comma. [i.e. hacker,juice,black], spaces will be removed: abcdef,apple,orange,iloveyou
ရှေ့တစ်ပိုင်းမှာက ပရိုဂရမ်က နမူနာ ပြထားတာတွေဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ပိုင်းမှာကတော့ ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်တဲ့စာတွေပါ။ လုပ်ကြည့်ရင် သိသွားမှာပါ
> Do you want to add special chars at the end of words? Y/[N]: y special char တွေ ထပ်ထည့်မလားမေးလို့ y လို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။
> Do you want to add some random numbers at the end of words? Y/[N]:y ကိန်းတွေပါ ထပ်ဖြည့်ထည့်ဦးမလား မေးလာတာပါ။ y ပေါ့။ ပိုစုံတာပေါ့ နော
> Leet mode? (i.e. leet = 1337) Y/[N]: y ဘာမေးမေး y ချည်းပဲဖြစ်နေပြီ။ :P
[+] Saving dictionary to khit.txt, counting 46948 words.
[+] Now load your pistolero with khit.txt and shoot! Good luck!
အထက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပြီး နောက်တစ်လိုင်း ကူးသွားပြီဆိုရင်တော့ သေချာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးတဲ့ words list က ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ တတိယကြောင်းနဲ့ နောက်ဆုံးကြောင်းမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ .txt ဆိုတာက
ထွက်လာတဲ့ ဖိုင်ကို ဖော်ပြတာမို့လို့ ခုနေမှာ အလွယ်တကူ ရှာဖွင့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်မှာ ပြောစရာရှိလာတာက ကျွန်တော်က khit.txt ဆိုပြီး Output ထွက်ပေမယ့် ကိုယ်ဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့ ဒေတာတွေပေါ် မူတည်ပြီး ဖိုင်နာမည် ကွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖိုင်ကို မြင်ရအောင်လို့ လက်ရှိ folder ထဲက ဖိုင် တွေကို list ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
CHANGELOG.md cupp.cfg khit.txt README.md
cupp3.py cupp.py LICENSE test_cupp.py
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ txt ဖိုင် တွေ့တယ်နော်။ khit.txt နဲ့
root@kmn:~/CUPP/cupp# leafpad khit.txt
ဒါကတော့ leafpad ကို အသုံးပြုပြီး အဲသည်ဖိုင်ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာပါ။ အဲသည်မှာ ပါတဲ့ passsword တွေကို မြင်နေရပြီပေါ့။ ဒါတွေက ခန့်မှန်း words list ပဲနော်။ ကျိန်းသေ ပါမယ်လို့ မပြောဘူး။ ကိုယ်ဖြည့်သွင်းတွက်ချက်တဲ့ info နဲ့ သူဖြည့်ထား အသုံးပြုထားတဲ့ passwords က တူညီမှု ရှိခဲ့ရင်တော့ အဲလောက်နဲ့ပဲ ရပြီပေါ့နော
ဒီအပိုင်းကို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အခါ မေးစရာမေးခွန်း ၂ခု ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
အဲသည် ဖန်တီးထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို ဘယ်မှာပြန်ယူရမလဲ? တစ်ဆင့်စီ ပြောပြရရင်
file ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ CUPP ဆိုတဲ့ folder လေးကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဖွင့်ရင် cupp တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဆက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ khit.txt ကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာကို ကူးပဲသွားသွား အပြီးပဲ ရွှေ့သွားသွား ရပါပြီ။
နောက်တစ်ကြိမ် words list ပြန်ထုတ်ချင်ရင် ဘယ်ကနေ စတင်ရမလဲ??? ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Terminal ကနေ သွားချင်ရင်တော့
ဆိုပြီး သုံးကြောင်းနဲ့ စတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပထမ နည်းပါ။
ဒုတိယနည်းကတော့ ခုန .txt ဖိုင်လေးကို ဝင်ရှာခဲ့တဲ့နေရာ (file>> CUPP >> cupp ) ထဲထိ ဖွင့်ဝင်ပါ။ cupp folder ထဲက နေရာလွတ်မှာ R-click နှိပ်ပြီး open in terminal ကို ရွေးပါ။
python cupp.py -i ဆိုတာလေးရိုက်ပြီး enter လိုက်ရင် ရပါတယ်။ terminal ကနေ ဝင်တာကတော့ ပိုမြန်ပြီး ပိုလွယ်ပါတယ်။
နမူနာ အနေနဲ့ လေ့ကျင့်ကြည့်ပါ။ info ပိုစုံအောင် ထည့်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် victim အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ့် password ပါ မပါ ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ပေးထားတဲ့ password က လုံခြုံမှု ရှိ မရှိ သိနိုင်ပါတယ်။
ခုတော့ ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲ ရပ်ထားရအောင်ပါ
ဒီ websiteကလေးမှာ တင်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ကဏ္ဍအလိုက် ကြည့်ရှုလိုပါက ဒီစာကြောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ် Menu box ကနေ ရွေးချယ်ပြီးလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Python-for-Hackers October 28, 2017
Python2 Lesson 6
Remark! Zawgyi 2009 နဲ့ ရေးမိလိုက်တာကြောင့် အချို့သော စာလုံးတွေကို ဖတ်ရတာ မြင်နေကျပုံစံနဲ့ မတူတာတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်လို့တော့ ရပါတယ်။ Zawgyi 2009 နဲ့ ရေးမိပြီးမှ မပြင်ချင်တော့လို့ ဒီတိုင်းလေးပဲ တင်လိုက်ပါတယ်။
Sequence and Lists
ဒီတစ်ခါတော့ Sequence and Lists အကြောင်း လေ့လာရအောင်ပါ
lists ဆိုတာတော့ Data တွေကို စနစ်တကျ စီစဉ်ထားပြီး လိုအပ်ချိန်မှာ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ဖို့ ကူညီပေးတဲ့အရာပါ။
ကဲ အောက်ပါအတိုင်းကို python မှာ စမ်းကြည့်ရအောင်။
>>> hk_class = [ 'Aung Aung' , 'Mg Mg' , 'Aye Aye' , 'Mya Mya' , 'Hla Hla' , 'Ko Ko' ]
input 1 ပထမဆုံးစာကြောင်းမှာ hk_class ဆိုတာကို variable ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။ class ထဲမှာပါဝင်သူတွေကတော့ အထက်ပါ name တွေပေါ့။
မှတ်မိဦးမယ်ထင်တယ်ဗျ။ Python မှာ အမှတ်စဉ်တွေကို ရေတွက်ရင် သုညက စတယ်ဆိုတာ။ မမှတ်မိရင်လည်း တစ်ခေါက် ပြန်ပြောပြပေးမယ်။
'Aung Aung' , 'Mg Mg' , 'Aye Aye' , 'Mya Mya' , 'Hla Hla' , 'Ko Ko'
၀ ၁ ၂ ၃ ၄ ၅
python မှာ နောက်တစ်လိုင်း အဖြေထုတ်ကြည့်ရအောင်
enter လိုက်တာနဲ့ အမှတ်စဉ်အလိုက်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုထုတ်ပြသွားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒါမျိုးကို စာတန်းတွေထဲကနေလည်း ထုတ်ယူဖော်ပြလို့ ရပါတယ်။ အောက်ပါ နမူနာလေးတွေကို လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
စာတန်းနေရာမှာ သင် နှစ်သက်ရာစာတန်း ပြောင်းရေးနိုင်ပါတယ်။
>>> 'I am learning python lessons.' 
၅လုံးမြောက်က l ဖြစ်တာကို တွေ့ရပါမယ်။
ခြားထားတာကိုလည်း ထည့်ရေတွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြထားခဲ့တယ်နော်။
ခုက variable မသုံးသွားဘဲ တိုက်ရိုက် ယူသုံးလိုက်တာပါ။
စာအရမ်းများတဲ့ အခြေအနေတွေအတွက် ရှေ့ဘက်ရေနဲ့ နောက်ပြန်ရေလို့ ရှိပါသေးတယ်။ နမူနာ ပြောပြပါ့မယ်။ နောက်က ပြန်ရေရင် -1, -2, -3 လို့ ရေတွက်ပါတယ်။ -0 လို့ မရှိလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
'a' , 'b' , 'c' , 'd'
ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါ ဥပမာမှာ ပြန်သုံးကြည့်ရအောင်
>>>'I am learning python lessons.' 
ရှေ့ဘက်က ရေတွက်ရင် l က အမှတ်စဉ် ၅ ဖြစ်ပါတယ်။
>>> 'I am learning python lessons.' [-5]
-5ဆိုတာ နောက်ကနေ ပြန်ရေတာပါ။
ကိုယ့်ဘာသာလည်း ရေကြည့်ပေါ့။ မမှန်တာ မရှင်းတာတွေ့ရင် comment မှာ မေးနိုင်ပါတယ်။
>>> c = [ 'hat' , 'heart' , 'hot' , 'horse' , 'hen' , 'hand' , 'home' ]
>>> c [-1]
>>> c [-5]
ဒီတစ်ခါ လေ့လာမယ့် function ကတော့ tuple function ပါ
အောက်ပါ လိုင်းလေးတွေကို ipython မှာ စမ်းကြည့်ရအောင် ..........
Kali Linux terminal မှာ apt install ipython -y လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။ install ပြီးသွားလို့ command line နောက်တစ်ခုပေါ်လာရင် ရပါပြီ။
Terminal မှာ ipython လို့ ရိုက်ခေါ်လိုက်ပါ။ iPython ကို သုံးတာက in & out ကို မြင်သာစေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
In ဆိုတာက Input စာကြောင်းဖြစ်ပြီး ထိုစာကြောင်းကြောင့် Output ရှိလာတဲ့အခါ ချက်ချင်း Out ဆိုတဲ့ စာကြောင်းနဲ့ ပြပေးမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။
iPython မှာ မသုံးချင်ရင်တော့ In [ ]: ထိကို ထည့်ရိုက်စရာမလိုပါဘူး
ဥပမာ In: x =2လို့ တွေ့ရင် x =2ပဲ ရိုက်ရပါမယ်။ ":" ရဲ့ ရှေ့ကအပိုင်းကို ရိုက်ထည့်စရာမလိုပါဘူး။
In : x = '1,2,3'
In : y = ('1,2,3')
In : z = ['1,2,3']
တစ်ဆက်တည်း ရိုက်သွားတာပေမယ့် တစ်ခုစီ ကွဲမြင်ရအောင် လိုင်း တားပေးထားတာပါ။
အထက်ပါ ဥပမာ ၃ခုကို လေ့လာပြီးတဲ့အခါ variable နဲ့ ဘာမှလည်း မထူးပါလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ variable ပါပဲ။ Tuple Function မှာ variable ထက် သာတဲ့ အချက်က
စာသားတွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ စာသားနဲ့ ကိန်းဂဏန်း အရောတွေ ဒါတွေတင်သာမက music, video, picture စတာတွေကိုပါ
Tuple ဟာ မျိုးစုံ သိုလှောင်နိုင်တဲ့ အားသာချက် ရှိတာပေမယ့် အားနည်းချက်တစ်ခုတော့ ရှိနေပါတယ်။
ဘာလဲဆိုရင် သူဟာ ကိန်းသေတွေကိုသာ ပုံသေ သိုလှောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ သိုလှောင်တန်ဖိုးကို ပြောင်းလဲလို့ မရတာပါပဲ။
variable တန်ဖိုးတွေကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့အကြောင်း သင်ခဲ့ပြီးပြီနော်။
နည်းနည်းလောက် စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်။ ipython မှာပဲသုံးလိုက်ပါမယ်။
In : x = ('baby',12)
Out: ('baby', 12)
variable အသွင်းတန်ဖိုးတွေကို ရေတွက်ပုံ0က စတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီနော်။
Tuple ဟာ တန်ဖိုးတွေကို အသေပဲ မှတ်ထားတယ်။ နောက်ထပ် ပြောင်းလဲလို့ မရဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။
ပြောင်းနိုင်မလား စမ်းကြည့်ရအောင်။ ခုန အောက်မှာပဲ ဆက်ရိုက်ပါမယ်။
In : x= 20
----> 1 x= 20
ဆိုပြီး error ကြီး တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အဲဒါ ပုံသေ တန်ဖိုးပဲ မှတ်ထားလို့ပါပဲ။
သာမန် variable မှာ ပြန်ကြည့်ရအောင်။ သိပြီးသားပေမယ့် တွဲပြီး ပြချင်လို့ပါ။
In : x = 20
In : x + 1
In : x = x + 5
လိုင်3းမှာ x ရဲ့ မူလတန်ဖိုးကို ပြောင်းလဲလိုက်တယ်။
Out: 25 ဒီနေရာမှာ x တန်ဖိုးအသစ်ကို ထုတ်ကြည့်လို့ မြင်ရပါပြီ။
ဒီအချက်ကို သတိထားလိုက်ရင် တန်ဖိုး ကိန်းသေတွေနဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ ကိန်းရှင်တွေကို သတိထားမိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
n :a= [ 'apple' , 50 , 'orange' , 10 , 'mango' , 12 , 'banana' ,5]
Out: ['apple', 50, 'orange', 10, 'mango', 12, 'banana', 5]
ဒီနေရာအထိမှာ ပြောစရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ tuple က သုံးရလွယ်တာမို့ မေ့စရာမရှိလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။
tuple ကို သုံးတဲ့အခါ (...) , [....] စတဲ့ လက်သည်းကွင်းနဲ့ ထောင့်ကွင်းတွေကို အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် အမှတ်စဉ်နဲ့တွဲပြီး ကုဒ်ပြန်ဖော်ရာမှာတော့ ထောင့်ကွင်း 
ကျောင်းတုန်းက သင်ခဲ့ရသလို လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်
variable သတ်မှတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။ tuple ကတော့ ကိန်းသေနော်။
In : x,y = 5,2
ကိန်းတွေ အများကြီးအတွက်လည်း မှတ်နိုင်ပါသေးတယ်။ နမူနာ -
In : w,x,y,z = 2,4,6,8
ဒီလောက်ဆို ခု သင်ခန်းစာလေးတွေကို အသုံးပြုတတ်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
အိမ်စာ လုပ်ဖို့ပျင်းတဲ့သူတွေအတွက် ပြန်နွှေးမယ့် သင်ခန်းစာလေးတစ်ခု လုပ်ချင်ပါတယ်။ Maths ထဲကပဲ အစား အကြောင်းပါ။
အစားဆိုတာနဲ့ ခေါင်းထောင်သွားပြီလား။ :)
In :a= 21
In :b= 5
In : a%b
လိုင်3း မှာ 21 ကို5နဲ့စားလို့ စားလဒ် ၄ ရသွားပါပြီ။
လိုင်း4 မှာတော့ အကြွင်းရှာတဲ့ ဖော်မြူလာကို သုံးထားတာမို့ ၅ လေးလီ ၂၀ အကြွင်း ၁ ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပထမ သင်ခဲ့ရတဲ့ သင်ခန်းစာပေါ့။ ခု ပြန်ပြောရတာက အဲဒါကို ပြန်ဆက်ချင်လို့ပါ။
ကောင်းပြီ။ တစ်လိုင်းစီမှာ စားလဒ် နဲ့ အကြွင်း ဖန်တီးနေရတယ်။ အဲ ၂ခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းဖော်မယ်။
အထက်ပါ problem ကိုပဲ တွက်ပါမယ်။ အကြွင်းရော စားလဒ်ရော တစ်ပြိုင်နက်တည်း လိုချင်တဲ့အခါမှာတော့
divmod Function ကို အသုံးပြုရပါတယ်။ နမူနာ ကြည့်ကြည့်ပါ။ လိုင်း5ကနေ ထပ်ဆက်မယ်နော်။
In : divmod (a,b)
a ကိုတည်ပြီးbနဲ့ စားရင် ရမယ့် စားလဒ် နဲ့ အကြွင်း ကို ဖော်ပြတာပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ နောက်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကို သွားရအောင်ပါ။
In : name = ()
In : if not name:
...: print "\_n There is nothing in name"
...: raw_input ("n\_ Press enter to exit.")
n\_ Press enter to exit.
အထက်ပါ သင်ခန်းစာကိုကြည့်ရင် name ဆိုတဲ့ variable တည်ဆောက်ထားပေမယ့် ဘာမျှ ထည့်မထားပါဘူး။
ဒါကြောင့် if not နဲ့ တွဲလိုက်တော့ မှန်သွားပါတယ်။ ကွင်းထဲမှာ တစ်ခုခု ထည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ အဖြေ မှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
In : name = "Mg Mg"
...: print "n\_ There is nothing in name."
...: print "The name of user is"
...: print name
...: raw_input("n\_ Press enter to exit.")
The name of user is
နောက်ထပ် ဥပမာလေးတစ်ခု ဆက်ကြည့်ရအောင်
အောက်ပါ ကုဒ်လေးများကို leafpad မှာရေးပြီး lesson6.py လို့ နာမည်တပ်ပြီး Desktop မှာ Save လိုက်ပါ။
အထက်ပါ ကုဒ်လိုင်းလေးတွေ ရေးပြီးတာနဲ့ Save လိုက်ပါ
ထုံးစံအတိုင်း cd Desktop လို့ ရေးပြီး terminal ထဲ ဝင်ပါ။
python lesson6.py လို့ရိုက်ပြီး enter လိုက်ပါ။
Q.1 ဘာ error တက်လာတာကို သင်တွေ့ရပါသလဲ။
Q.3 သင် ဘယ်လိုရှင်းမလဲ။
Lesson7ကြည့်ရန် ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပါ
Hacking Knowledge October 26, 2017
Port Scanning အပိုင်း - ၁
Port Scanning အပိုင်း ၁
ဒီခါတော့ ကျွန်တော်တို့ Port Scanning အကြောင်းကို ဆွေးနွေးရအောင်ခင်ဗျ။
မဆွေးနွေးမီ ပထမဆုံး ဖော်ပြလိုတာက ကျွန်တော်တို့ ခုဆွေးနွေးနေခဲ့တဲ့ Article တွေသည် သင်ခန်းစာ သင်တဲ့ပုံစံ မဟုတ်ဘဲ ဆောင်းပါးပုံစံနဲ့သာ ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်တာကြောင့် နားလည်လွယ်အောင်လည်း ပြောရသလို အရမ်းရှည်မှာလည်း စိုးရတာကြောင့် အချို့အပိုင်းတွေမှာ လစ်ဟာမှု ရှိနိုင်သလို သင်တန်းတွေမှာ သင်ရသလို အစဉ်လိုက်လည်း ကျမှာ မဟုတ်ပါ။ (အဆင်ပြေရာအပိုင်းကို အရင် ရေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်)။ သို့သော် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် သာ ပြန်လည် စုစည်း လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ကောင်းမွန်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ General Knowledge တွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး CEH ဖြေလိုသူတွေအတွက်လည်း အထောက်အကူ ပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာလေးကို ဦးစွာ ပြောကြားထားပါရစေ။ ဒီဆောင်းပါးကလေးတွေသည် Hacking နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည်တတ်ကျွမ်းနေသူများအတွက် မရည်ရွယ်ပါ။ Hacking ကိုယခုမှ လေ့လာလိုသူများနှင့် အချို့အရာတွေကို သိပြီး အခြေခံအချက်တွေကို ရှာဖွေနေသူများအတွက် တစ်ခုခု လေး ပေးစွမ်းနိုင်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ကာ လွဲချော်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါကလည်း ကျွန်တော်၏ လိုအပ်ချက် သာ ဖြစ်ပါကြောင်းခင်ဗျာ။
Scanning ဆိုတာက Hacking ရဲ့Phase2ဖြစ်ပါတယ်။ Phase 1 မှာ အချက်အလက်တွေ စုခဲ့တယ်။ Phase2မှာ ထပ်ပြီး စုရဦးမယ်။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့လဲဆိုရင်တော့ Scanning Method နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ Scanning ပိုင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် အပိုင်း နှစ်ပိုင်း ထပ်မံ ခွဲလို့ ရပါတယ်။ Network Scanning နဲ့ Port Scanning ဆိုပြီး ခွဲခြားလေ့လာနိုင်တာကြောင့် တစ်ပိုင်းစီပဲ ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ ခု ဆွေးနွေးကြမှာက Port Scanning ပေါ့။
များသောအားဖြင့် Network services & program တွေသည် ဘယ် protocol ကို အသုံးပြုနေကြတယ် ဆိုတာ သင် သိပါသလား။
ကျွန်တော်တို့တွေ အများဆုံး အသုံးပြုနေကြတာက TCP/IP Network Protocol ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၇၀ နှောင်းပိုင်းတွေမှာ US ကာကွယ်ရေးဌာန အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေ စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော် ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒီလောက် အိုမင်းနေတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုကို အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပြီး အသုံးပြုမှု အများဆုံး ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို သင့်အနေနဲ့ သံသယ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ (ယုံချင်မှ ယုံပါမယ်)။ ဒါပေမယ့် ဒါကတော့ အမှန်တရား တစ်ခုပါပဲ။ မတူခြားနားတဲ့ နည်းပညာပေါင်းများစွာ ထပ်မံ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေကတော့ TCP/IP ကို ဆက်လက် အသုံးပြုနေကြဆဲပါပဲ။
Service သည် port တွေကနေ တစ်ဆင့် listen လုပ်ပါတယ်။ client တစ်ခုသည် service ကို contact လုပ်နိုင်ပြီး connection တစ်ခုကို ထူထောင်နိုင်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ information တွေကို transfer လုပ်ဖို့ နဲ့ service ကို request ပြုလုပ်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က server တစ်ခုရဲ့ port တွေကို scan ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ port တွေဟာ response အနေနဲ့ ပြန်လာပါတယ်။ ဒီလို ပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ port သည် open (ပွင့်နေ) တယ် ဆိုတာကို သိနိုင်ပြီး service သည် ထိုပေါ်မှာ listen လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ port scanning ကို အတိုကောက် ဖွင့်ဆိုကြည့်ခြင်းပါပဲ။
ဒီ article ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ port scanning tips တွေ၊ Ping နဲ့ TCP/IP stack, three-ways handshake mechanism, TCP flags, NMAP နဲ့ TCP connect scan, half-open scan/stealth scan နဲ့ UDP port scan စတာတွေအကြောင်း port scanning tool အနည်းငယ်အကြောင်းတွေကို ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးသွားဖို့ ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
Port ဆိုတာဟာ communication channel တွေကြားမှာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ဖို့အတွက် အသုံးပြုတဲ့ software abstraction တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ Ports တွေသည် single machine ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ specific application တွေကို identify လုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Port Scanning ဆိုတာ port တွေရဲ့ current status ကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် port ပေါင်းများစွာကို တစ်နေရာကနေ စမ်းသပ် လုပ်ဆောင်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို စုပေါင်းထားထားတဲ့aset of actions ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်း ပြောရရင်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေက port တွေကို ပွင့်နေလား ပိတ်နေလား ကြည့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြတယ်။ ပွင့်နေတယ်ဆိုရင် ဘာအားနည်းချက်တွေ ရှိမလဲ ရှာဖွေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ port တစ်ခုရဲ့ status မှာပွင့်နေတယ်လို့ ဖော်ပြရင် (ပွင့်နေရင်) application သည် listening လုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး ထို port ကနေ connection လုပ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ communication channel တွေ ကြားမှာ distinguish လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Port Scanner (port scanning ပြုလုပ်တဲ့ software) တွေကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာ နည်းနည်းလေး ထည့်သွင်းပြောပြချင်တာ ရှိပါတယ်။ IP address နဲ့ port အကြောင်းပါ။ IP address ကိုတော့ network ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ machine တွေကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ Port တွေကိုတော့ ထို Machine တွေထဲက machine တစ်ခုချင်းစီမှာ ရှိနေတဲ့ particular application တွေကို ရှာဖွေနိုင်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ network ထဲက machine တစ်လုံးချင်းစီမှာ port တစ်ခုထက်မက များစွာ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ အသုံးများဆုံး port တွေကတော့ HTTP အတွက် browser ကနေ သုံးတဲ့ TCP port 80 နဲ့ HTTPS အတွက်Browser ကနေ အသုံးပြုတဲ့ port 443 တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ အချိန် သိပ်မရတာကြောင့် ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲ ရပ်နားပါရစေခင်ဗျာ
နောက်နေ့မှာ Port Scanning Methods တွေ အကြောင်း ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ယခု website ကလေးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ကဏ္ဍအလိုက် ကြည့်ရှုလိုပါလျင်တော့ ဒီစာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပြီးလည်း ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်သလို Menu Box ကလေးကနေပြီးလည်း ရွေးချယ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
By KhitMinnyo on October 26, 2017 1 comment:
Python-for-Hackers October 25, 2017
Python2 Lesson 5
Length Function အကြောင်း ။
len() နဲ့ အတိုကောက် ရေးရတဲ့ Length Function ဟာ အသုံးဝင်လှတဲ့ ဖန်ရှင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
စာလုံးရေ ရေတွက်တဲ့ word count တွေကို len() နဲ့ အသုံးပြုပါတယ်။ နမူနာလေး ကြည့်ရအောင်။
>>> x = "I Love Python!"
>>> y = len(x)
>>> y ပြီးရင် enter ပါ
အဖြေ ၁၄ ကို တန်းထုတ်ပေးသွားပါတယ်။ နည်းနည်း ရှင်းပြပါမယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ variable x ကို တည်ဆောက်ပြီး I Love Pytnon! လို့ ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။
y ကိုတော့ len(x) x မှာရှိတဲ့ စာလုံးအရေအတွက်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် y တန်ဖိုး ထုတ်တဲ့အခါ စာလုံးရေကို ထည့်သွင်းထုတ်လိုက်ခြင်းပါ။
စာလုံးရေ ရေတွက်တဲ့အခါ ".." မျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်ကြားမှာရှိတဲ့ စာလုံးအရေအတွက်အားလုံးကို ယူပါတယ်။ space ခြားလည်း ထည့်တွက်ပါတယ်။
စာမေးပွဲလေးတစ်ခု စစ်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ အမှတ်ပေးရမယ့် စာမေးပွဲပေါ့။ မစစ်ခင်
R1. အထက်ပါ သင်ခန်းစာတိုလေးတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး မိမိဘာသာ လေ့ကျင့်ခဲ့ဖူးပါသလား။ မေးချင်ပါတယ်။
နမူနာအနေနဲ့ သင်ခန်းစာထဲ မပါပေမယ့် ကျွန်တေ်ာ လေ့လာခဲ့စဉ်က ပေါင်းစပ် လေ့ကျင့်ဖူးတာလေးတစ်ခု မှတ်မှတ်ရရ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အထက်ပါ len() ကိုပဲ ပေါင်းစပ်ပြပါ့မယ်။
>>> x = raw_input("Type Here:")
Type Here:Khit Minnyo
နာမည်စာလုံးတွေက ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရတာပါ။ ဒီနေရာမှာ နှစ်သက်ရာပြောင်းရေးနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဥပမာလေးပေးခဲ့ပါပြီ။ len()ကို လေ့လာကတည်းက ဘာနဲ့ပေါင်းစပ်ရမလဲ တွေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် len() အကြောင်း သိဆိုပဲ
အထက်ပါအတိုင်း raw_input နဲ့ စမ်းသပ်လိုက်ပါတယ်။ class ထဲက fri တွေလည်း အဲလို ပေါင်းစပ် လေ့လာဖူးပါသလားခင်ဗျာ။
စာမေးပွဲမေးခွန်း စပါပြီ။ ကိုယ့်ဘာသာ အမှတ်ပေးရမှာနော်။
Q1. Lessons အမှတ်စဉ်အလိုက် သင်ခန်းစာအားလုံးကို တစ်ခုမကျန် လုပ်ဆောင်ဖူးပါသလား။
လုပ်ဆောင်ဖူးပါက 1 မှတ်
Q2. lessons များအားလုံးကို ကြည့်ပြီး လုပ်ဆောင်ရုံမက ပြီးဆုံးသည့်အခါ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်မကြည့်ဘဲ အလွတ် လုပ်ဆောင်ဖူးပါသလား။
လုပ်ဆောင်ဖူးပါက2မှတ်
Q3. Lessons များကို အထက်တွင် နမူနာပြခဲ့သလို R1.သင်ခန်းစာတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး မိမိဘာသာ ဖန်တီးဖူးပါသလား။
လုပ်ဆောင်ဖူးပါက3မှတ်
Q4. အားလပ်ရက်များတွင် ပြန်လည်လေ့ကျင့်ခဲ့ဖူးပါသလား။
လုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါက2မှတ်
Q5. သင်ခန်းစာ အားလုံး လုပ်ဆောင်ရင်း ပျင်းပြီး မလုပ်ချင် ဖြစ်ဖူးပါသလား။ စိတ်ပါဝင်စားစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါက2မှတ်။ စိတ်မပါသော်လည်း မိမိလေ့လာမှု အကျိုးရှိစေဖို့
အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်ပါက2မှတ်။ အချို့ သင်ခန်းစာတွေကို ဖတ်ရုံပဲ ဖတ်ကြည့်ပြီး မလုပ်ဆောင်ဘဲ ချန်ခဲ့ပါက 1 မှတ်။
စာမေးပွဲမေးခွန်းလေးတွေတော့ ပြီးပါပြီ။ မိမိကိုယ်ကိုယ် မိမိသာ အသိဆုံးမို့ အမှန်အတိုင်း အမှတ်ကလေးတွေကို comment မှာ ပြောပြခဲ့ပေးပါဦး။
len() function ကို မှတ်မိသေးတယ်မို့လား။ မမှတ်မိသေးရင်လည်း ပြန်ပြောပြမယ်။
ဒီပုံစံမျိုးကိုပဲ word count အတွက်ပဲ အမြန် အသုံးလိုတဲ့အခါ တိုက်ရိုက် သုံးလို့ ရပါသေးတယ်။
>>> x = len("What is your name?")
ရေတွက်မယ့် စာတန်းကို len() ထဲ တိုက်ရိုက် ထည့်သွင်းလိုက်တာပါ။
python file လေးတွေ ရေးပြီး save ဖို့ အကြောင်း ဖွင့်သုံးဖို့အကြောင်း နည်းနည်း သင်ပါမယ်။
နည်းနည်းဆိုပေမယ့် များများ မှတ်ထားပြီး ပေါင်းစပ် လေ့လာဖို့ကတော့ မိမိဘာသာ ကြိုးစားရမှာနော် :)
leafpad ကိုဖွင့်ပါ။ (Terminal ကနေ leafpad လို့ ရိုက်ပြီး enter ရင်လည်း ရပါတယ်။)
leafpad ကလေး ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါလိုင်းကလေးတွေကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
name = raw_input("Enter your name.")
ပြီးတဲ့အခါ lesson1.py ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ desktop မှာ သိမ်းလိုက်ပါ။ Save ပြီးတဲ့အခါ terminal အသစ်ဖွင့်ပြီး
python lesson1.py ဆိုပြီး ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ Enter your name ဆိုပြီး မြင်ရပါမယ်။ နာမည်တစ်ခုခု ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။
ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ နာမည်ကို print ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့က linux မှာ run ကြည့်လိုက်လို့ပါ။ အဲသည်ဖိုင်ကိုပဲ ကော်ပီယူ။ Windows ဘက်ကနေ ဝင်လို့ရတဲ့ နေရာတစ်ခုခုမှာ
memory stick (or) other location တစ်ခုခုရွေးပြီး ကူးထားလိုက်ပါ။ windows ဘက်ကနေ ဝင်ကြည့်ပြီး Double Click နှိပ်ပြီး RUN
ကြည့်ရင် ဘာထူးခြားတာ တွေ့ရပါမလဲ??????????
linux terminal မှာ RUN နေရင်းနဲ့လည်း သတိထားလို့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုရင် နာမည်ဖြည့်သွင်းပြီး enter လိုက်တာနဲ့ ဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့ နာမည်ကို
ပရင့်ထုတ်ပြပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို နောက်တစ်လိုင်း ကူးသွားတာကို တွေ့ရမှာပါ။
root@kmn:~/Desktop# python lesson1.py
Enter your name.khitminnyo
root@kmn:~/Desktop# နောက်ထပ် command line ကို ရောက်သွားတာပါ။ ခုန စမ်းခဲ့တဲ့ lesson1.py ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့သဘော။
နာမည် ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ cmd ပါ ပျောက်သွား (program ပိတ်သွား) တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒါ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ program ကို ခဏ ရပ်ပေးမယ့် ကုဒ် မထည့်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိုဂရမ်ကို ခဏ ရပ်တန့်နေအောင် ကုဒ် ထပ်ဖြည့်ဖို့ လိုပါပြီ။ ခုန lesson1.py ကိုပဲ leafpad ကနေ ပြန်ဖွင့်ပါ။
မဖွင့်တတ်ဘူးလား။ Desktop က lesson1.pyဆိုတဲ့ဖိုင်ဆီသွား Right-click နှိပ်။ Open with text editor ဆိုပြီး တွေ့လိမ့်မယ်။ ထိပ်ဆုံးမှာပဲ။
ဖွင့်ပြီးသွားရင် ခုန စာ ၂ကြောင်းအောက်မှာ နောက်တစ်ကြောင်း ထပ်ဖြည့်ကြည့်ပါ။
ခုတော့ ဒီလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဘာထူးခြားသွားလဲကြည့်ကြည့်။
terminal ကနေ run ရင်လည်း Press enter တစ်လိုင်း ထည့်ထားတဲ့အတွက် နာမည် ရိုက်သွင်းလိုက်ရုံနဲ့ နောက်တစ်လိုင်း ရောက်မသွားသလို windows ဘက်နေ run ရင်လည်း press enter ဆိုတဲ့တစ်လိုင်း ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်ပြီး enter နှိပ်လိုက်ပါမှ program ရပါပါမယ်။
>>> name = raw_input("Enter your name:")
Enter your name:KhitMinnyo
>>> print "\_n The length of your name is", len (name)
The length of your name is 10
>>> raw_input ("Press Enter")
တစ်လိုင်းစီအတွက် အဖြေပါ ထုတ်ထားတာ တွေ့ရပါမယ်။
အထက်ပါ နမူနာကိုပဲ leafpad မှာ ရိုက်ကြည့်ပြီး Save လိုက်ပါ။ ရိုက်တဲ့အခါ အနီရောင်နဲ့ ပြထားတာတွေက output မို့ ထည့်မရိုက်ရဘူးနော်။ အထက်ပါ နမူနာကို ရိုက်တဲ့အခါ ဒီအတိုင်းဖြစ်နေပါမယ်။
print "\_n The length of your name is", len (name)
raw_input ("Press Enter")
ဒီတိုင်းရိုက်ပြီးရင် save ပါ။ နာမည်က lesson2.py ပေါ့။ ခုနဖိုင်နဲ့ မတူအောင် Desktop မှာပဲ ထားထားလိုက်။
ဒါကတော့ leafpad မှာ ရိုက်ရတဲ့ line code တွေပါ။ Save တဲ့အခါ lesson2.py အမည်နဲ့ Save လိုက်ပါတယ်။ ပြီးရင် terminal ဖွင့်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း RUN လိုက်ပါတယ်။
root@kmn:~/Desktop# python lesson2.py
Enter your name:Khit Minnyo နာမည်ရေးပြီး enter လိုက်ပါတယ်
The length of your name is 11 စာလုံးရေ အရေအတွက်ကို ထုတ်ပြလာပါတယ်။
Press Enter ပရိုဂရမ် ချက်ချင်း ပိတ်မသွားအောင် ထားထားတဲ့ ကုဒ်ပါ
root@kmn:~/Desktop# Enter နှိပ်လိုက်လို့ နောက်တစ်လိုင်း ကူးသွားပါတယ်။
ဖိုင်တွေ မွမသွားအောင် ဒုတိယ lesson2.py ကိုပဲ Edit ပြန်လုပ်ပြီး ထပ်ဖြည့်ကြည့်ရအောင်။
ခုန ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဖိုင်ကို R-click နှိပ်ပြီး Open with text editor နဲ့ပဲ ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။
အောက်ဆုံးကြောင်းမရောက်ခင် ထပ်ဖြည့်မှာမို့ ဒုတိယကြောင်းနောက်ဆုံးမှာ ကာဆာချပြီး enter ဆင်းလိုက်ပါ။
ဖြည့်ရေးပြီးသားပုံစံကိုပဲ တစ်ခါတည်း ပြောတော့မယ်နော်။
if "n" in name:
print "There is 'n' letter in your name."
print "There is no 'n' letter in your name."
ပြီးရင် ဖိုင်ကို Save လိုက်ပြီး Terminal ကနေ RUN လိုက်ပါဦး။
n နဲ့ ရှာခိုင်းထားတာမို့ n ပါတဲ့ နာမည်နဲ့ မပါတဲ့ နာမည် ၂မျိုးနဲ့ စမ်းကြည့်ပါ။ နမူနာကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Enter your name:Khit Minnyo
The length of your name is 11
There is 'n' letter in your name.
ပထမတစ်ကြိမ် ဖြည့်သွင်းတဲ့ နာမည်မှာ n ပါတဲ့အတွက် အဖြေပါ။ terminal မှာပဲ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန် run ပါ။
Enter your name:Mg Mg
The length of your name is 5
There is no 'n' letter in your name.
ဒုတိယ ဖြည့်သွင်းတဲ့ နာမည်မှာ n မပါပါဘူး။
n ပါ မပါဆိုတာကို if else နဲ့ ရေးထားတာပါ။ if else ကို သိပြီးပြီနော်။
Python သင်တာ ၅ပိုင်းတော့ ရှိလာပြီ။ ဘာ ပရိုဂရမ်တွေကို ရေးနိုင်နေပြီလဲ။။။။။။။
မရေးတတ်သေးဘူးလို့ မဖြေပါနဲ့။ ဒီလိုဖြေရင် သင်ခန်းစာကို လက်တွေ့ အသုံးမချဘူးလို့ အဖြေ သက်ရောက်ပါတယ်။ ခုလောက်ပဲ သိတဲ့အနေအထားနဲ့တင် program တွေ ရေးလို့ရနေပါပြီ။
ကောင်းပြီ ပရိုဂရမ်ကလေးတစ်ခု ရေးရအောင်ပါ။ ထောင့်မှန်စတုဂံ တစ်ခုရဲ့ ဧရိယာ ရှာတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုပေါ့။
:) ကျောင်းမှာ သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ထဲက လွယ်တာလေးပဲ နမူနာပြတာပါ။
ဧရိယာ = အလျား x အနံ
lenght = x, width =y, area = z လို့ ထားပြီး နမူနာ ရေးပြမယ်။ ပြန်လုပ်ရင် ထားချင်တဲ့စာလုံးထားနော်
အောက်ပါ ဖိုင်ကလေးကို leafpad မှာ ရေးပြီး Desktop မှာပဲ area.py ဆိုပြီး သိမ်းလိုက်ပါ။
print "Area of the rectangle in square cm"
x = input("Enter the length of the ractangle, in cm.")
y = input("Enter the width of the ractangle, in cm.")
print "square cm"
ပြီးရင် Terminal ကနေ
root@kmn:~/Desktop# python area.py ဆိုပြီး ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
Area of the rectangle in square cm ဒါကတော့ ပရိုဂရမ် ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ ဖော်ထားတာပါ။
Enter the length of the ractangle, in cm.12 (၁၂က ကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တာ)
Enter the width of the ractangle, in cm.5 (ဒါရောပဲပေါ့)
60 အလျား x အနံမို့ ၁၂ ငါးလီ ခြောက်ဆယ် အဖြေ ရပါပြီ
square cm ဧရိယာမို့ ယူနစ် ၂ထပ် ထွက်သွားပါတယ်။ အဆင်ပြေရဲ့လားခင်ဗျ
ကျွန်တော်တို့ ဒါလေးတွေ ဖန်တီးကြည့် ရေးကြည့်တာ သင်ခန်းစာထဲ မသင်ခဲ့ရဘူးခင်ဗျ။
လေ့လာနည်းတွေထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ သင်ခန်းစာကြည့် လိုက်လုပ် ရအောင်လုပ် ပြန်မကြည့်ရအောင်လုပ် ပြီးရင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်စဉ်းစား။
ခုလို ပရိုဂရမ်လေးတွေကို လွယ်လွယ်ရေးနိုင်နေပြီ။ ထပ်ပြီး တွေးကြည့်နိုင်ရင် ဒီ့ထက်ကောင်းတာလေးတွေတောင် ရေးနိုင်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ တော်လောက်ပြီခင်ဗျ
လေ့ကျင့်ဖို့နဲ့ တစ်ခုခု ဆက်စပ် စဉ်းစားဖို့အတွက်ဆို အချိန် ၂နာရီကျော် လုပ်ရတော့မယ်။
နည်းနည်းတော့ အားတင်းထားမှ :)
Lesson6ကြည့်ရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပြီးသွားပါ
By KhitMinnyo on October 25, 2017 No comments:
Technology News October 24, 2017
Android Phone များနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါက်ကြားမှုများ
(ပုံလေး ၅ပုံနဲ့ နည်းနည်းလေး စကားပြောပါရစေ)
တစ်ပုံစီ caption မရေးတော့ဘူးနော်။ ဒီနေရာမှာ ပဲ ပြောပြတော့မယ်။ messenger မှာ စာဝင်လာပါတယ်
"ကျွန်တော့် ဖုန်းလေး အရမ်းလေးနေတယ်။ fb မှာ ကြော်ငြာတွေ့လို့ အဲဒီ app ကလည်း ကျွန်တော့်ဖုန်းအမျိုးအစားနဲ့ တူလို့။ အဲဒါလေး သုံးသင့်သလား" တဲ့
သူပြောတာကို သိလိုက်လို့ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီကြော်ငြာကို ခဏခဏ တွေ့နေမိရာက view တွေ သိပ်များလာတာကြောင့် fri တွေထဲက တကယ် မသိတဲ့သူတွေကို ဒီ post လေးနဲ့ ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဟာတွေပါ မိမိဘာသာ ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ပါ။
ပထမဆုံးပုံက ကျွန်တော့်ဆီမှာ ပေါ်နေတဲ့ ကြော်ငြာဗျ
ဒုတိယပုံက အခြားသူတွေဆီမှာလည်း သူတို့ဖုန်း brand တောင်မဟုတ်ဘူးနော်
ဖုန်း brand ရော model နံပါတ် အတိအကျ ထည့်ကြော်ငြာတာ။ ဥပမာ Mi Max နဲ့ Facebook သုံးတဲ့ ကျွန်တော့်ထံ Mi Max only လို့ ကြော်ငြာလာမယ်။ Samsung Galaxy Note 8 နဲ့ fb သုံးသူတွေအတွက် Galaxy Note 8 only လို့ ကြော်ငြာဝင်မယ်။ (အတိအကျ ကြော်ငြာပြနိုင်တာက fb သည် ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ရောက်သုံးနေတဲ့ device ကို အတိအကျ မှတ်တမ်းတင်ထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်)။ ဒီလောက်ဆို ဘယ်ဖုန်းတွေကို ဘယ်လိုဝင်ကြော်ငြာမလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါပြီ။
Install now ကို နှိပ်လိုက်တော့ Play Store ကို တိုက်ရိုက် ရောက်သွားတဲ့အတွက် User တွေရဲ့ Trust တစ်ခု ရ သွားပါတယ်။ (PlayStore ကနေ ရတဲ့ software မှ စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်း အကြီးကြီး မိထားတာကိုး)
PlayStore မှာ developer account ပိုင်ရှင် ($ ဝင်ကြေးသွင်းနိုင်ရင် ဘယ်သူမဆို) application တင်လို့ရပါတယ်။ Google က စစ်ဆေးတယ်ဆိုပေမယ့် Device damage ဖြစ်စေတဲ့ app တွေကိုသာ စစ်ဆေးပယ်ဖျက်ပေးတာပါ။ Sypware တွေကိုတော့ စစ်ဆေးပယ်ဖျက်ခြင်း မရှိပါဘူး။
ဒီတော့ PlayStore က ရတာဆို စိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့ ဂျင်း မိထားသူတွေက ဆွဲတော့တာပဲပေါ့။ Samsung S series မဟုတ်တဲ့ ဖုန်းအတော်များများ ပူကြတာပါပဲ။ ပူရင် လေးတာပါပဲ။ ဒီတော့ သူက ပေါ့တယ် ရှင်းတယ်ဆိုတာကို လိုချင်တာ မဆန်းပါဘူး။ ပိုဆိုးတာက Playstore က ရတယ်ဆိုတိုင်း မယုံတတ်သေးတဲ့ အတော်အသင့် သိသူတွေက app တစ်ခုကို ဝင်ကြည့်ရင် review လေးတွေ ကြည့်လေ့ရှိကြတယ်။
ဒီ ပုံက review တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ချက်ချင်းတောင် သွင်းမိကြမှာပါပဲ။ ကောင်းတယ်ဆိုတာက ၉၉% လောက် ထောက်ခံထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ (acc တစ်ခုရှိရင် ထောက်ခံချက် တစ်ခု ရေးနိုင်ပါတယ်)
Install ဆိုတာလေး နှိပ်မိပြီဆိုပါစို့။ google warning လေး အရင်လာတယ်ဗျ။ ဒီ app က ဘာ Access တွေ ရယူမယ်ဆိုတာ ဖော်ပြထားတာ။
ပုံမှာ ကြည့်ကြည့်ဗျာ။ များလိုက်တဲ့ Access တွေ ကို တွေ့ရမယ်။
ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ ကြော်ငြာသည် model တစ်ခုချင်းစီကို ခွဲကြော်ငြာတယ်။ model တစ်မျိုးတည်းအတွက် သီးသန့် app ဆိုတာ မူလ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီက လိုအပ်လို့ လုပ်ပေးတာမျိုးက လွဲပြီး သီးသန့်မရှိပါဘူး။ ဒါ ပထမဆုံး မသင်္ကာစရာ အချက်ပါ။
ဒုတီယအချက်က Access တောင်းခံတဲ့နေရာ။
အဲသည်နေရာမှာ စပြီး သတိထားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခု ထည့်သွင်းမယ့် app က RAM memory တွေကို ရှင်းပေးမယ်။ နောက်ကွယ် run နေတာတွေကို ပိတ်ပေးပြီး ဖုန်းကို အပူသက်သာအောင် ဖန်တီးပေးမယ်။ ဒါလေးပါပဲ။ ဒါကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ အင်တာနက် မလိုပါဘူး။ ဓာတ်ပုံဖိုင်တွေကို ကြည့်ခွင့်ပေးစရာမလိုပါဘူး။ file manager access ရယူပြီး file တွေ ရှင်းပေးမယ်ဆိုတာ လက်ခံလောက်စရာရှိပေမယ့် Access တွေထဲမှာ camera (သူ့ကို ကင်မရာသုံးခွင့်ပြုရအောင် သူ့ app ကိုသုံးပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်မှာမှမဟုတ်တာ)
နောက် audio device ကနေ အသံဖမ်းနားထောင်ခွင့်။ contacts (သူနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ)
SMS (ဒါလည်း personal) ပဲ ဒီတော့ ဒီ Application သည် မရိုးသားဘူး လို့ ဆိုလိုရာ ရောက်ပါတယ်။ ဒါက သာမန်အတွေးပါ။
၁။ သူတို့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းထဲက ဓာတ်ပုံ နဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ရယူဖို့ကြိုးစားတယ်
၂။ contact တွေနဲ့ အရေးကြီးတာတွေကို သူတို့ server ဆီ ပို့စေတယ်
၃။ သူတို့အတွက် အကျိုးအမြတ်မရနိုင်မယ့်သူဆိုရင် အဲဒါတွေထက် ကြော်ငြာတွေ ကျွန်တော်တို့ကို ပြမယ်
၄။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ microphone နဲ့ camera access ကို သုံးပြီး ကျွန်တော်တို့ ပြောသမျှ ကြားနေရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ သွားသမျှ မြင်နေရမယ်။ အဲလိုလုပ်နိုင်ဖို့လည်း ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် (မသိလိုက်ဘဲ) ခွင့်ပြုပေးခဲ့မိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
နည်းနည်းလောက် အကျဉ်းချုပ်ပြောပြတာတောင် တော်တော်ရှည်သွားပြီ။ နောက်ဆုံးပြောလိုတာက အယုံမလွယ်ပါနဲ့ စဉ်းစားပါ လို့သာ
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ပေါက်ကြားခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ
(သင့် fri တွေ သိစေချင်ရင် လွတ်လပ်စွာ Share နိုင်ပါတယ်)
By KhitMinnyo on October 24, 2017 No comments:
Labels: Hacking Knowledge, Hacking with Android, Technology News
Hacking Knowledge October 24, 2017